HPVနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ - Hello Sayarwon
HPV ( Human Papilloma Virus )ဆိုတာ ဘာလဲနဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းဘာကြောင့်သတိထားသင့်သလဲ။
HPV (သို့မဟုတ် ) Human Papilloma Virusသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသောသူများသည် လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်တွင် ကြွက်နို့များပေါက်ခြင်းနဲ့ သေစေနိုင်လောက်သည်အထိ ပြင်းထန်သော ကင်ဆာများဖြစ်သည့် လိင်တံကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ်နှုတ်ခမ်းသားကင်ဆာ၊ စအိုကင်ဆာ၊ လည်ချောင်းကင်ဆာ၊ လျှာကင်ဆာနှင့် အာသီးကင်ဆာများ ဖြစ်နိုင်သည်။ လူတော်တော်များများက HPVသည် ယောက်ျားမိန်းမမရွေးဘဲ ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်သည်ဆိုတာ သတိမမူမိကြပေ။ HPVသည် အမျိုးသမီးတွေကိုပဲ ရွေးဝင်တာမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားများဆီတွင်လည်း ရှိနေတတ်ပါသည်။
HPVသည် ကင်ဆာရောဂါကို မဖြစ်စေနိုင်တောင်မှ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်တွင် ကြွက်နို့များပေါက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုကြွက်နို့များ ပေါက်နေလျှင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါသည်။ ကြွက်နို့များ ပေါက်ခြင်းသည် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ လူတော်တော်များများကကြွက်နို့များ လိင်အင်္ဂါတွင် ရှိနေလျှင်ထိုပေါက်နေသောလူသည် လိင်ကိစ္စတွင် အလွန်ရမ္မက်ပြင်းထန်သောသူများဟု ယူဆထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် ထိုရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီဆိုလျှင် သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်မှ သင်ဖောက်ပြန်နေသည်ဟု ထင်သွားနိုင်သည်။ သင်လည်း ကျန်းမာနေပါလျက် ဤရောဂါ ဘယ်ကရသနည်းဟု သူတို့ထင်တတ်ကြသည်။
လူတော်တော်များများက ထိုရောဂါသည် လူ၏ကိုယ်ထဲတွင် အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ သတိမပြုမိဘဲ ရှိနေနိုင်သည်ကို မသိကြပေ။ ကြွက်နို့ပေါက်မှသာသတိထားမိတတ်ကြသည်။ သင်ကြွက်နို့များကို သတိမထားမိခင် ရှေ့အချိန်များတည်းက သင့်တွင် ကူးစက်ခံနေရပြီး ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အချစ်ရေးသည် ဤရောဂါကြောင့် ပျက်စီးအဆုံးသတ်မလားဆိုတာကတော့ ပြောရခက်ပါသည်။ သင်သည် တစ်ကိုယ်တည်းသမားဖြစ်နေရင်တော့ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်တွင်ပေါက်သော ကြွက်နို့များသည် သင့်လက်တွဲဖော်ရရှိဖို့နဲ့ အနာဂတ်မိသားစုဘဝဖန်တီးနိုင်ရေးတွင် အတားအဆီးဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် မကုဘဲထားသော (သို့မဟုတ်) ခဏခဏပြန်ဖြစ်နေသော လိင်ဆက်ဆံရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါရှိနေလျှင် သင်လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့မလွယ်နိုင်ပေ။
HPVကာကွယ်ဆေး- ပြဿနာများအားလုံးကို ဖြေရှင်းမည့် အဓိကသော့ချက်
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အား ဤပြဿနာများအာလုံးကို ကာကွယ်နိုင်မည့်နည်းရှိနေပြီဟု ပြောလာလျှင် သင်ထိုနည်းအား လက်ခံမည်လား။ သင့်အဖြေက“လုပ်မှာပေါ့” ဖြစ်နေပါက သင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကို စလုပ်သင့်ပါသည်။ HPVရောဂါတွင် ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ပို၍ထိရောက်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခါဝင်လျှင် ထိုရောဂါပိုးသည် သင်၏ကိုယ်ထဲတွင် ကျန်ရှိနေသော သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရှိနေနိုင်ပါသည်။ သူပေါ်ချင်သောအချိန် ပေါ်လာနိုင်သည်။ HPVကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါလက္ခဏာများကို အချိန်ပေး၍ ကုသလျှင် သက်သာနိုင်သော်လည်း ထိုရောဂါပိုးကိုတော့ အမြစ်ပြတ်အောင်အသေသတ်၍မရပေ။
ထို့ကြောင့် မဖြစ်ခင်တည်းက ကာကွယ်ဆေးကြို၍ ထိုးထားသင့်သည်။ HPVကာကွယ်ဆေးများသည် စိတ်ချရသည်၊ ထိရောက်သည်၊ အချိန်အကြာကြီး ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အခြားကာကွယ်ဆေးများထိုးလျှင် ဖြစ်နေကြဖြစ်သော အနည်းငယ်ဖျားခြင်း၊ ထိုးထားသောနေရာတွင် အောင့်ခြင်း၊ အရေပြားတွင် အကွက်ထခြင်းများမှလွဲ၍ ဆိုးရွားသော ဆိုးကျိုးထိခိုက်မှုများမရှိနိုင်ပေ။ HPV ကာကွယ်ဆေးသည် သင်အရွယ်မရောက်သေးခင် ထိုးထားလျှင် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတိုင်းသင်အရွယ်ရောက်သောအချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့မရဘူးဟု မဆိုလိုပေ။ သင့်အသက်သည် ၄၅နှစ်အောက်ငယ်မည်ဆိုလျှင် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ နောက်မကျသေးပေ။
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများအား HPVကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ကြပါစို့။
HPVရောဂါပိုးသည် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ကူးစက်နိုင်သောကြောင့် သင့်တွင်ရှိနေလျှင် သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကိုပါ ကူးစက်စေနိုင်သည်။ HPV ရောဂါပိုးရှိနေလျှင် လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်တွင် ကြွက်နို့များပေါက်တာအပြင် တခြားဆိုးရွားသော ရောဂါများနှင့် ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးလုံးတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ကင်ဆာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။သင့်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များထဲမှ တစ်ချက် သို့မဟုတ် အကုန်လုံးနှင့် ကိုက်ညီနေပါက ရောဂါရနိုင်ချေ မြင့်တက်နိုင်သည်။
ပထမဆုံး လိင်ဆက်ဆံသော အရွယ်ငယ်ခြင်း
လိင်တံထိပ်မှ အရေပြားအား ဖြတ်ခြင်းမျိုး မရှိခြင်း
လိင်ဆက်ဆံသည့် အဖော်တစ်ဦးထက် များခြင်း၊
ခုခံအားကျဆင်းသော ရောဂါများရှိနေခြင်း အစရှိနေသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်ကိုသာမက သင်ချစ်သောသူကိုပါ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ သင်ချစ်သောသူကို လုံခြုံအောင် ထိုကဲ့သို့ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ဘယ်ကိစ္စမဆို တာဝန်ယူစိတ်အပြည့်အဝရှိသူဖြစ်ကြောင်း ပြသပြီးဖြစ်သည်။ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် သင်သည် လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခုခံရေးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားသောသူများပင်လျှင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှု လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။လူထုကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အတွက် သင့်တွင် တာဝန်အပြည့်အဝရှိသည်။
ထို့ကြောင့် သင့်တွင် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် လုံးဝမရှိလျှင်တောင် ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ခြေ ရှိနေနိုင်သေးသည့်အတွက်ကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်၂၆နှစ်ပြည့်ပြီးလျှင်တော့ ကာကွယ်ဆေးအာနိသင်ရရန် ကြာကြာစောင့်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် နောက်မကျခင် မြန်မြန်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
Marra, C., Ogilvie, G., Gastonguay, L., Colley, L., Taylor, D. and Marra, F. (2009). Patients With Genital Warts HaveaDecreased Quality of Life. Sexually Transmitted Diseases, 36(4), pp.258-260. Mortensen, G. and Larsen, H. (2010). The quality of life of patients with genital warts:aqualitative study. BMC Public Health, 10(1).
https://www.jostrust.org.uk/about-cervical-cancer/hpv-vaccines-and-preventing-cervical-cancer/hpv-vaccination-boys-and-menAccessed February 27, 2018.
https://www.webmd.com/sexual-conditions/hpv-genital-warts/qa/how-effective-are-hpv-vaccines. Accessed February 27, 2018
Moscicki, A. andPalefsky, J. (2011). Human Papillomavirus in Men. Journal of Lower Genital TractDisease, 15(3), pp.231-234.
Oral HPV affects more men than women in the U.S.http://www.cbc.ca/news/health/hpv-men-1.4358091Accessed February 26, 2018.